Ny Soavaly Hackney sy ny toetra mampiavaka azy | Soavaly Noti
Ny karazana soavaly Hackney, antsoina koa hoe Norflok Trotter, dia fiaviana anglisy y es tena ankasitrahana noho ny fahaizany lehibe. Ny anaran'ny karazany dia avy amin'ny teny Anglo-Saxon hnegan, izay midika hoe mifanakaiky. Ity teny ity dia hiaraka amin'ny Norman voajirika izay mety hanjary derivation ny teny latina equus. Efa ao amin'ny antokom-pirazanana ny karazany dia afaka manomboka mijery ny fahagolan-tany izy. Ny teny hoe Hackney dia efa voasoratra tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo tany Angletera.
Ireo dia mitovy Izy ireo dia miavaka indrindra amin'ny trot azony, avo sy miavaka. Avy amin'io toetra io indrindra no nahazoany ny anaram-bosotra hoe "The Aristocrat of Exhibitions." Fantatsika tsara kokoa ve izy ireo?
Ny karazany Hackney, noho ny fivezivezeny anaty lalana sy ny fiakarana, dia fantatra amin'ny làlan'ny fampisehoana Equine, miavaka amin'ny maody hitch. Zanaka mitovy amin'ny mety amin'ny akanjo, fifaninanana ary fampirantiana. Noho izany, mora ny mahita azy ireo amin'ny fifehezana toy ny fampirantiana, fitafiana na fampirantiana fitifirana.
1 Tahaka ny ahoana ilay soavaly Hackney?
2.1 Ny fahatongavan'ilay lalamby
Tahaka ny ahoana ilay soavaly Hackney?
Miaraka amin'ny haavo manodidina ny 155 cm, mijery soavaly izahay manan-tsaina sy tena mirehitra. Azo lazaina momba azy ireo fa izy ireo soavaly mahery manana endrika mirindra. Misongadina ao aminy ireo marika mahavariana: manangan-tànana ary mametaka be any aoriana, manao hetsika boribory. Io hetsika io no nampalaza azy ireo tamin'ny tontolon'ny fampirantiana Equine.
Manana loha somary kely sy somary convex izy ireo miaraka amin'ny mombamomba ny rectilinear, izay misy maso roa lehibe. Satro-boninahitra ny lohany sofina kely sy finday izay toa mailo hatrany. Ny hatony dia lava sy miolakolaka ary mitarika soroka matanjaka sy tratra malalaka.
Ny vatan'ity karazany ity dia tena matevina ary miforona tsara. Izy io dia manana lamosina lamosina, taolan-tehezana boribory ary rump.
Ny rantsany dia salantsalany ary vita amin'ny tranga boribory sy mafy. Manana hozatra betsaka amin'ny sorony sy lohalika lava miforitra tsara izy,
Ny volony silky matetika misy sosona chestnut, chestnuts, chestnuts mainty na chestnuts, ity farany no be mpampiasa indrindra. Tamin'ny taonjato voalohany nipoiran'ny karazany dia azo zahana ihany koa ny kapaoty Tobiano mainty sy ny capiano Tobiano, na dia maty aza izy ireo ankehitriny
Nandritra ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, palitao miloko mainty, piebald ary chestnut no aleony, mety kokoa hijerena fiara. Ohatra, ny loko maivana toy ny chestnut, chestnut volamena, chestnut mena dia hita ihany mandra-pahatongan'ny mitataovovonana.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, misy ihany koa Hackney Ponies (misy haavo 142 cm eo ho eo ny haavony.) izay mitovy amin'ny an'ny soavaly ny làlan-kalehany. Ao amin'izy ireo, ny hetsika boribory ataon'ny trot dia miharihary kokoa, rehefa manandratra ny lohalika izy ireo ary mametaka ny vodilaharana amin'ny fomba izay handalovan'ireo hock ao ambanin'ny vatana.
Tany Angletera tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny mpitaingin-tsoavaly dia toa liana te hahalala hoe iza no karazana soavaly fitaovam-piadiana tsara indrindra. Ny tanjona dia ny handrakotra soavaly mitaingina soavaly anglisy azy. Teo anelanelan'ny taonjato ity sy ny manaraka, ny fototra dia napetraka ho an'ny maro amin'ireo karazana britanika be mpitia indrindra ankehitriny. Ny valin'ny asan'ny mpiompy, izay nahatratra firaketana lehibe tokoa momba ny karazana nosy.
Ny karazana Hackney dia nipoitra tao Great Britain tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na dia teo am-piandohana aza dia nampiasaina indrindra toy ny soavaly mitaingina sy soavalyAndroany dia afaka mahita azy io amin'ny fitsipi-pifehezana mpitaingin-tsoavaly marobe isika. Misaotra ny fahaizany rehetra.
Ny soavaly voalohany amin'ity karazana ity dia teraka tany Norfolk (Angletera) tamin'ny 1760. Nanomboka tamin'io fotoana io sy noho ny soavaly fitsangantsanganana tany Norfolk sy Yorkshire, ireo mpitaingin-tsoavaly vaovao dia namolavola sy nahazo ny mampiavaka azy ireo mandra-pahatonga azy ireo ho lasa karazany manokana.
Anisan'ireo razamben'ny hazakazaka Hackney amin'ny lafiny ray dia afaka mahita isika hazakazaka Thoroughbred avy amin'ny tsipika Darley Arabo. Tamin'ny 1797, ny fanatanjahan-tena momba ny fidirana an-tsokosoko dia tafiditra betsaka amin'ny fiainana anglisy. Tena nankasitrahana ireo maria manana gaita toy izany. Na izy ireo na ny mares an'ny karazana soavaly fonosana dia nampiasain'ny mpiompy hanamafisana ny toetran'ny Hackney tamin'izany fotoana izany.
Nanjary karazany sarobidy tokoa izy io. Iray amin'ireo soavaly soavaly tianao indrindra amin'ireo vehivavy noho ny lalàny. Nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX sy nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia soavaly sadely no tena nampiasana azy io. Tena sarobidy ihany koa amin'ny hazakazaka fihazakazahana voalohany.
Ny troteran'izy ireo haingana sy ny hetsika nataony dia nahatonga azy ireo soavaly tian'ny olona. Izany dia namokatra izany Ireo mpiompy soavaly amerikana avaratra dia nisafidy an'io karazana io hanatsara ny azy ireo mampiavaka ny toetra maivana kokoa.
Tao anatin'ireo taonjato ireo, ny vondrom-piompiana dia nahita soavaly mahasoa iray tamin'ny karazana Hackney. Ankoatry ny fanompoana soavaly soavaly, afaka nikarakara ny toeram-pambolena izy indraindray.
Ny fahatongavan'ilay lalamby
Nandritra ny famoronana ny lalamby dia tandindomin-doza ny hazakazaka Hackney. Nanomboka nahatsapa ny olona fa haingana kokoa ny mandeha lamasinina noho ny mitaingin-tsoavaly. Ny lalamby tsy ela izy io dia nanolo ny asa nataon'ny soavaly fitetezana trondro maro be. Betsaka ny mpiompy no nihevitra fa tapitra mandrakizay ny taonan'ny soavaly ary nijanona tsy nanao asa fiompiana intsony. Na izany aza, ny Fikambanan'ny Soavaly Hackney nihetsika haingana ary nanavotra ny hazakazaka Hackney tamin'ny alàlan'ny famoahana ny maha-ilaina azy manoloana ny asa hafa. Ny karazany dia nahazo mpanaraka izay nahita ireo equines ireo soavaly tena tsara ho an'ny fialamboly. Teboka tsara nanohana ny karazany fa tamin'io fotoana io dia nanomboka nipoitra ny fanandramana soavaly mitaingina kalitao, miaraka amin'ny bika aman'endrika. Noho izany dia nifantoka tamin'io lalana io ny mpiompy sasany. Nanomboka niely nanerana an'izao tontolo izao ny lazan'ny Hackney anglisy.
Rehefa ela, ny karazany dia nitombo santionany, nahazo sy nanamafy ny toetra misolo tena azy io anio. Mba hahatratrarana an'io, amin'ny génétique Hackney, firazanana maro no nandray anjara mitovy. Ny sasany dia: ny soavaly mitaingina Norfolk sy Yorkshire, ny Friesianina, ny Normanina, ny Galloway ary na ny Andalusia aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ny Soavaly Hackney sy ny toetrany avo lenta
Misaotra betsaka anao nizara ity vaovao ity. Hitako fa manangona angano momba ireo soavaly ireo aho, ho fampandrosoana ny fizahan-tany Equestrian, rehefa avy nandinika ireo phenotypes sy ireo centaurs izay nanidina teny an-damosin'izy ireo. Goavana ny kolontsaina mpitaingin-tsoavaly isam-pirenena.